Gaafaadhi Oo ka Hadlay Guddoomiyenimada Kulmiye – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Gaafaadhi Oo ka Hadlay Guddoomiyenimada Kulmiye
Wasiirka wasaaradda xannaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland ahna Afhayeenka xisbiga Kulmiye mudane Xasan Maxamed Gaafaadhi ayaa sheegay in ololaha ay bilaabeen dad danaynaya kursiga guddoomiyaha xisbiga Kulmiye yahay mid wakhtigiisii laga soo qaddimay.
Dhawaan waxa baraha bulshada iyo saxaafadda si weyn looga dareemay taageero kursiga guddoomiyaha Kulmiye loogu muujinayo Maxamuud Xaashi Cabdi taas oo loo arkayay olole uu ugu jiro helista kursigaasi.
waraysi siiyay wariye Luqmaan Maxamed Faarax oo ka tirsan telefishanka Bulsho ayaa la waydiiyay aragtidiisa dadka bannaanka ka sii bilaabay ololaha ay ugu xusul duuban yihiin kursiga waxaanu ku tilmaamay kuwo qaddiman.
‘Horta nidaam buu leeyahay oo lagu wareejiya guddoomiyaha.cidna ma wareejiso reerrana ma wareejiyaan ee xisbiga ayaa lagu tartama, waa hawl xisbiga u taalla, hawl ololeba u baahan maaha, qofka ololaynaya dee xisbiga ayuu ka dhex ololeeya meel kale lagama ololeeyo. waxa go’aammiya ee dadka kala reeba waa xisbiga, xisbiguna madal buu leeyahay. maalinta ay timaaddo qofkii tartama dee wuu ka tartama, marka anigu waxaan qaba haddii ololeba jiro oo cidi ololaynayso in ololaahi olole wakhtigiisii ka hor dhacay in uu yahay meeshiisiina aanay ahayn ciddii hunguri hayaana in ay la sugto madasha maalinteeda wax walba maalin bay leeyihiin maalinta in lala sugo ayaan anigu qaba,” Sidaas ayuu yidhi Mudane Gaafaadhi.
Wasiir Gaafaadhi oo la waydiiyay wakhtiga ay xilalka xisbiga wareejinayaan isaga oo ah afhayeenka xisbiga, madaxweyne Biixi oo ah guddoomiyaha xisbiga iyo wasiir Maxamed Kaahin oo ah guddoomiye xigeenka xisbiga waxa uu ku dooday in aanu jirin sharci faraya in ay wareejiyaan wakhti gaar ah, islamarkaana aanay jirin sabab ay u wareejiyaan.
Previous Madaxweynaha Ethopia oo warqadaha aqoonsiga ka gudoontay danjiraha cusub ee Soomaaliya u jooga dalkaasi
Next Madaxweynaha Smaliland Oo U Jawaabay Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro